Ejiji edozi a na - eji ejiji - ejiji, agbamakwụkwọ, mgbede, obere, pigtail, okooko osisi, ntutu, nkume, Grik, curls, ìhè, mara mma, quads
Uwe ntutu na nchara - echiche kachasị mma maka obere, ogologo ma ọ bụ ntutu isi
Ihe ndị dị mma na ntutu na-eme ka ihe oyiyi ahụ doo anya, enweghị nkwenye na ịma mma. Ihe ndị dị otú a na-enyere ndị inyom aka ịkwado ọdịda nke ndị ọzọ, na-emesi ụdị onye ọ bụla ike. Otu n'ime ndị a kasị mara amara na ụdị ejiji ugbu a bụ ụzọ edozi isi.
Uwe ejiji - ntutu isi
Ruo ugbu a, enwere nhọrọ dịgasị iche iche nke ngwa ngwa ndị inyom . Ndị na-emepụta ihe na-enye nanị ngwaahịa ndị na-edozi ahụ na mgbede, ụdị maka uwe na-adị kwa ụbọchị na nhazi ọkpụkpụ nke ga-enye aka iji dochie ụta ọ bụla. Uru nke mara mma mara mma bụ ihu na-emepụta ma na-ahọrọ curls, nke ọnụ na-eme ka ọdịdị ahụ dị ọcha ma dozie ya. A na-egosikwa ụdị edozi ndị kachasị mma na nkedo na mkpebi ndị dị otú ahụ:
A ụyọkọ . Nhọrọ a ga - enye aka ichikota ntutu niile, ma ọ dị mfe ịme. Ngwunye ahụ nwere ike ịbụ ma na vertex ma ọ bụ n'akụkụ ma ọ bụ n'azụ isi. Ngwunye mara mma ga-eme ka ọ dị mfe itinyekwu ihe na-adọrọ mmasị.
Na shea . Ụzọ ntinye nke a dị mkpa karịsịa maka ụmụ agbọghọ ndị na-agbaso koodu uwe. Ma ọ bụrụ na iwu ọrụ gị na-enye gị ohere ịchọ mma dị mma n'isi gị, mgbe ahụ, mkpuchi a na-eyi akwa ga-abụ ezigbo nhọrọ, nke ga-eme ka njide nke ọdịdị ahụ pụta ìhè.
" Malvinka" . Ọdịdị dị mma na-agba ọsọ, nke ejiri ejiji ma ọ bụ ntutu isi kpuchie isi ya, na-emesi ike ịlụ nwanyị na romance. N'ikwekọ na hoop, ebe a ga-adịkwu nro na nụchaa, na-agbakwụnye àgwà ndị a na oyiyi ahụ dum.
Spit na spikelet . A na-atụle ngwọta kachasị mma nke nwanyị na akpachi a na-ahụ maka eluigwe na ala ọ bụghị naanị maka onyinyo ahụ ọ bụla, kama maka ụdị ọdịdị ọ bụla. Ruo ogologo oge, ụmụ nwanyị na-eji aka ha achọ mma, bụ ebe ndị kasị ewu ewu na-abụ ihe mkpuchi na ikpé.
A na-eji ntutu isi mee ogologo maka ntutu
Ụmụ agbọghọ ndị mara mma na-agba mbọ ka ha kwupụta ọdịdị ha. A sị ka e kwuwe, a na-atụle ogologo oge niile dị ka ụbụrụ na feminin. Otú ọ dị, n'ihi ọrụ na ike nke ụmụ nwanyị ejiji ejiji, ọ dị mkpa iji hụ na nkasi obi na ịba ụta bara uru. Na iji mesie ihe mara mma ma na n'otu oge iji wepụ ntutu site na ihu, ngwọta kachasị mma ga-abụ mgbakwunye n'ụdị hoop. A na-eji ajị anụ eji ogologo oge mee ihe dị mma, jikọtara ya na braid braids ma ọ bụ na enweghị obere nlekọta, nke dị oké mkpa na oge ndị a.
A na-eji ntutu isi na-eji ntutu isi eme ihe
Mods na curls nke ogologo oge dị mma, dị ka ọ dịghị onye ọzọ. A sị ka e kwuwe, ụdị ntụgharị ahụ dị mfe ime, ma na nkwụsịtụ mkpebi ahụ onyinyo ahụ ga-adọrọ mmasị ma dị mma. Ọ dị ezigbo mma, karịsịa maka ịrụ ọrụ na-arụ ọrụ kwa ụbọchị, a na-ewere ya dị ka edozi isi na roba na ọkara isi. N'okwu a, ngwa ahụ nwere ike na-eyi naanị n'elu ọnụ ahụ, nke ga-ele anya n'egosipụta ya ma mee ka ụda olu na ụta. A na-enye echiche ejiji n'usoro dị iche iche nke yok yarn maka ụda na-agbanwe. Usoro a dịkwa mkpa na mkpebi na-enweghị isi na obere curls na-agbatị.
A na-eji ntutu isi na mkpụmkpụ na obere ntutu
Mods na ntutu isi dị mkpụmkpụ dị mkpa inye ụda, karịsịa ma ọ bụrụ na oval nke ihu dị warara, anya anaghịkwa adị. Ọ bụrụ na ị nwere ụdị dịka pixị ma ọ bụ ụdị mmadụ, ọ bara uru ịkwụsị ihe mkpuchi dị iche nke iche iche ndo ma ọ bụ obere ihe ndozi. Ụdị ejiji dị mkpụmkpụ dị otú ahụ, dị ka square na agwa, na-enyekwu mgbakwunye na nkwupụta dị iche iche, ngwaahịa ndị nwere nnukwu mkpụmkpụ, ọdịdị pụrụ iche. Nyere na obere ntutu isi na-emeghe ntị, ị nwere ike iburu otu ọla na ọla ntị na ngwa na isi gị n'otu nhazi.
Ụdị ejiji na Rim
Na ahịa nke oge a, e nwere nhọrọ dịgasị iche iche nke ihe ịchọ mma mara mma site na ọtụtụ ihe. Na-emekarị, ma ihe sara mbara ma dị mma, nke dị warara. Isi ntutu na-ele anya na ikiri abụọ. Maka ihe ndozi nke nna ukwu jiri rhinestones, nkume, okooko osisi, akụkụ ndị e ji rụọ ọrụ, ákwà dị iche iche nke textures. N'okwu a, ọdịdị nke hoop n'onwe ya nwere ike ịbụ ihe siri ike gburugburu isi ma ọ bụ n'ụdị mgbatị. Ihe ngwọta nke ọma ga-abụ ihe nlereanya na obere ezé dị ka mbo n'ime ime, nke nwere ike ịchekwa mma ya ogologo oge. Ka anyi lee ihe ndi ozo kacha mma:
Ngwa Velvet . Otu n'ime ụdị ígwè kachasị mma a na-eji mara mma. Velvet dị mkpa ma na ụta na-agba kwa ụbọchị, ya mere a na-ewere ngwaahịa ndị ahụ dị ka ihe niile.
Ụdị . Nwanyị na nwanyị ga-ejikọta ụta ahụ na akwa silk, satin, ụbụrụ e ji ebipụta. Iji debe ngwa ahụ n'isi, ndị na-emepụta na-etinye teepu ahụ na kaadiboodu ma ọ bụ n'osisi osisi.
Ihe ịchọ mma Lacy . Ọ bụrụ na usoro gị kwa ụbọchị na- ezute ntụziaka ịhụnanya dị nro, mgbe ahụ nhọrọ kachasị mma ga-abụ mgbakwunye site na lace. Na-emekarị, ma nwa ojii ma ọcha, na akwa agba lace. Nhọrọ a na-enwekwa ihe ịga nke ọma maka ụta ndị inyom n'ụzọ.
Na ákwà mkpuchi . Ihe kachasị ọhụrụ ma dị iche iche bụ ihe e ji eme ihe, nke a na-ejikọta ya na anya. Ihe dị otú ahụ ga-eme ka ihe omimi, nhazighachi na nhichapụ ụta. Ndị na-ede akwụkwọ na-ejikwa ihe eji emechi ihe ọ bụghị nanị iji pụọ, kamakwa na nchịkọta kwa ụbọchị.
Ịcha mma na nkwụ nke okooko osisi
Okpokoro okooko osisi ga-agbakwunye ihe oyiyi nke ohuru ohuru, nke oma na nke nwanyi. Ngwa ndị dị otú ahụ aghọwo ihe ọzọ dị iche iche iji kpoo ya. Na omume a, ọ bụghị naanị ụdị nke okooko osisi, ma na-adị ndụ. Ọtụtụ mgbe, a na-ejikọta ngwaahịa ndị ahụ na ahịhịa ndị e ji achọ mma. A na-eji ntutu isi na-ama mma n'ahịrị na-egbu egbu, ebe a pụrụ ịtọ ntutu isi ma ọ bụ obere obere, nnukwu, agba chaotic. Ihe ngwọta dị mma ga - abụ ihe dị elu na - eme ka okpueze dị elu. Na nke a, ọ bara uru ịhọrọ ihe eji eji obere buds nke obere nha iji mee ka ókèala dị n'agbata isi ihu na nnukwu isi.
A na-eji isi ntutu isi edozi isi
Ụdị ejiji na-eme n'oge na-adịbeghị anya bụ ihe a na-akpọ akpaka. N'okwu a, ndị nna-ukwu na-eme n'enweghị ngwa, ma mee ya na ntutu. Ndị kasị ewu ewu bụ ntutu isi pigtail. N'ebe a, ọtụtụ n'ime ntutu isi na-adaghachi azụ, ma n'egedege ihu ya dị ọcha, ma ọ bụ na-eleghara anya na-akwado ya. Ebe a nwere ike ịbịaru ya na curls ma ọ bụ na ọ na-eji ọkwá dị ka ọdụ, ụyọkọ, shea na strands. A na-eme mkpebi ọzọ dị mma n'isi isi. Nke a na-aga nke ọma na okpomọkụ, n'okpuru ụzụ azụmahịa, maka ọzụzụ egwuregwu.
A na-eji ntutu isi na nkume
Ihe ịchọ mma na nkume rhinestones na nkume dị mma ma mara mma. Na-emekarị dị ka nnukwu nnukwu ihe ndozi, na mpempe akwụkwọ nke obere placers. Maka ihe na-eme kwa ụbọchị, stylists nwere ike ikwu na ị na-ahọrọ ngwa ngwa dị mma na obere monochromatic ma ọ bụ ọtụtụ pebbles. N'ihi na ụta ndị e ji ejiji bụ ihe mgbakwunye ndị kwesịrị ekwesị na-eji ihe ngosi kwadoro maka agba nke kristal ma ọ bụ dị oké ọnụ ahịa. Ihe ndị a na-achọsi ike bụ ndị zuru oke maka ntutu isi . Karịsịa ewu ewu bụ edozi isi na rim. Enwere ike ijikọta nkume na okooko osisi, pel na ịkpụ.
Ịcha mma na nti ntị
Nhọrọ dị mma nke ejiji n'oge a bụ ihe ịchọ mma, ndị ntị ntan na-agbakwụnye. N'okwu a, a na-eji isi ihe dị mkpa, n'akụkụ nke ọ bụla nke triangles abụọ. Ụdị ụdị ndị a na-egosi na a na-eji akwa akwa, ajị anụ, feathers na mkpụmkpụ ndị ọzọ. A na-eji ákwà eji emepụta ihe na-edozi anya na-eme ka ọkpụkpụ na-eme ka ọ dị mma. A na-ewere igwe dịka mgbagwoju anya. Nyere na ngwa ndị dị otú ahụ ga-adabara nke ọma na nwata, ụda ahụ nwere ike ịgbakwunye ya na agba agba - site na polishing, agba ma ọ bụ ndò.
Bezel maka ụzọ edozi isi n'ụzọ Grik
Ntucha kachasị ewu ewu, ebe a na-eji ejiji ejiji karịsịa oge, bụ echiche dị iche iche n'asụsụ Grik. Nke a na-adabara ntutu isi ọ bụla. Otú ọ dị, a pụrụ imepụta echiche ndị dị mgbagwoju anya na nke mbụ na ogologo curls. Akpụkpọ ụkwụ a pụrụ ịdabere na ya bụ ihe na-agbanwe agbanwe maka ụzọ isi Gris. N'okwu a, ngwa ahụ nwere ike ịdị mkpa, ịkwado, otu, abụọ na ọbụna okpukpu atọ. Ụzọ kachasị mfe bụ iji mejupụta ndị na-agbanwe agbanwe. Ụdị Grik kwekọrọ n'ọkwá dị elu. Na iji mesie ogologo ya ike ga - enyere ndi mmadu aka.
A na-eji ajị anụ na-egbuke egbuke
A na-ejikọta akwa ntutu ndị a na-ejikọta magburu onwe ya na hoop. N'okwu a, ịnwere ike iji ngwà dị egwu. Ihe mgbakwunye dị mma ga-abụ ụta a kpụkọrọ ọnụ. Na ụdị oge a, a nabatara nleghara anya na enweghị nchekasị. Ya mere, a ga-amanye ntutu isi na nnukwu curls n'otu oge ahụ. Ọ bụrụ na ịhọrọ ngwa na ihe ndozi n'otu akụkụ, mgbe ahụ, a ga-enwe ntutu isi n'akụkụ ya. Mkpụrụ obi ụtọ na-adọrọ adọrọ na nnukwu nhazi. Ma ọ bụrụ na ị nwere isi isi ntutu isi, mgbe ahụ ihe ngwọta dị mma maka gị ga-abụ edozi isi na roba.
Ụdị edozi abalị na mmiri
Ihe ngwọta a na-eji eme ihe n'oge ụta mgbede ga-abụ ịbịkọta anụ na hoop. A na-edepụta nsụgharị a n'ụdị dị elu, dị mma, ebe a na-ekeji ntutu isi ya na akụkụ atọ, nke ọ bụla n'ime ha na-atụkwasị n'elu nke ọzọ na beam free. A na-eji edozi ejiji dị mma na nkedo na ngwọta na-adịghị edozi na curls na-adọrọ adọrọ. Maka ụta ji ụta, nhọrọ a ga-ahọrọ ga-abụ ihe eji achọ mma na okooko osisi. Ngwakọta ahụ ga-adị n'otu ma ọ bụrụ na ochicho mma na-aza ụda n'otu ihe ọzọ - uwe, akpaba, akpụkpọ ụkwụ. Maka oge ezumike, ịnwere ike ime ọdụ site na-ekpuchi onye ejiri ya na ntutu isi.
Uwe eji agba agba na Rim
Na agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ nke oge a, a na-eji hoop na-eme ihe kama iji kpoo okooko osisi. Ya mere, ihe kachasị mma bụ ihe atụ okooko osisi. Otú ọ dị, ọ bụrụ na a kwadoro onyinyo gị na ejiji dị nro, mgbe ahụ, a ga-eji okpukpu ala ma ọ bụ nkume mee ihe n'ahịrị. Maka agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ na-abụghị nke a, a na-ewere ngwa ngwa ejiji akwa dị mma. N'ọdịdị nke oge a, a nabatara ọmarịcha ihe dị ebube nke nwoke a na-alụ ọhụrụ. Otú ọ dị, mma mara mma dị mma maka edozi isi.
A na-eji edozi edozi isi maka ịjụ ntutu isi na ụdị nke Grik na eriri akpa a na-agbanwe. N'okwu a, nhọrọ ahụ ga-abụ ihe ịchọ mma na ihe ịchọ mma n'akụkụ. Ụmụ agbọghọ nwere mkpịsị ntutu isi na-atụ aro ka ha kwụsịrị na hoop dị mkpa na nnukwu ifuru ma ọ bụ ihe ndị e ji nkume rụọ. Ihe mbụ na ihe omimi nke onyinyo gị ga-agbakwụnye eriri nwayọọ. Na iji mesie di na nwanyi ike, kwadoro na mkpuchi mkpuchi. Ma na nke a, ọ dị mkpa iji mee ka ọ dị mma.
Mee-elu - Fall 2016
Mgbụsị akwụkwọ Mgbụsị akwụkwọ 2013
Agbamakwụkwọ edozi maka obere ntutu 2016
Nchacha ọcha 2017 - echiche ejiji, usoro, akwụkwọ ndị ọzọ, ngwọta kacha mma
Ihe Ndị Nwanyi - Ụdị 2015
Nwa nwanyi na-eme ka ọ ghara ịkwa iko 2016 - cascade
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ oyi na-emepụta ihe
Echiche nke akwụkwọ nri French
Ejiji agba agba ejiji 2015
Ọrụ nke aerogrill
Sụ na mushrooms
Okpokoro akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ n'ime oghere
Tupu na mgbe, ma ọ bụ n'ihi gịnị ka anụ ọhịa ji chọọ onye dị mma foto?
Ebe nkiri na Ufa
Gypsy uwe mwụda
Kedu ihe inye onye nduzi?
Mgbidi mgbidi maka igwe
Nwunye mbụ nke "onye omekome mara mma" nyere ajụjụ ọnụ banyere ime ọpụpụ na ndụ dị jụụ mgbe ọ gasịrị
Ihe ọṅụṅụ Celery maka ọnwụ na-efu
44 nwamba na-egosipụta mmetụta gị n'ebe ọrụ
Akụkụ nke afo n'afọ ime
Bouquet nke nwunye 2015
Ọfụfụ si ụfụfụ na-arị elu
Akpa maka ịwu ihe
Akara maka ụmụ amụrụ ọhụrụ
Sasha Peters aghọwo abụba!
Nkwalite okwu nke ụmụaka 3-4 afọ